Misy distro rehetra .... | Avy amin'ny Linux
Ranomasina bytes dia nosoratana manodidina ny dinika nifanaovan'ny mpanohana ny ezaka mitambatra sy ny mpanohana ny fahasamihafana. Ny marina dia isaky ny fizarana mahomby dia tsy maintsy misy 10 izay tapaka satria tsy manome zava-baovao ……… .. Fa ity lahatsoratra ity dia tsy momba ny distros toy izany, ity lahatsoratra ity dia momba ny fizarana foto-kevitra.
Saingy tsy misy lohahevitra amin'ny sehatry ny fampiasana (distros miompana amin'ny fanabeazana, fiarovana, famonjena, fanontana audiovisual, ivon-haino aman-jery sns.) ………… .fa manodidina lohahevitra iray .. ..
1) The Hanna Montana Distros and Justin Beiber
Tsy raharaha lehibe izy ireo. Hanna's dia Kubuntu miaraka amina sary sokitra, sary ary mozika Hanna. Justin's dia mitovy nefa mifototra amin'ny Puppy. Dia hoy izy ireo Disney dia fahavalon'ny loharano misokatra.
2) Mangaka y Otakux, loas distros ho an'ny Otakus. Tsy lazaina intsony …… ..
3) Mussolinux sy Kintana Mena …… ..Nijanona noho ny demokrasia sosialin'ny ivon-toerana.
4) Distros ara-pinoana
Iza no nilaza fa ny atheista sy ny agnostika ny Linux? Raha i Saint Ignucius dia azo raisina am-pahamatorana, dia misy dikany ihany koa fa misy ny distro ara-pinoana. Androany ilay fanontana malaza amin'ny Ubuntu izay miorina amin'ny Kristiana (UbuntuCE) ary ny Silamo (Sabily, fantatra taloha amin'ny anarana hoe Ubuntu Muslim Edition) dia mbola mavitrika ary miavaka amin'ny fampiharana azy mifototra amin'ny fivavahany. Amin'ny tranga UbuntuCE dia misy Xiphos (handalina ny Baiboly), OpenLP ary Quelea (ho an'ny karaoke Kristiana ao am-piangonana) ankoatry ny fananana sivana ray aman-dreny (zavatra tena ilaina …….). Raha ny momba an'i Sabily dia manana zekr izy ireo (fandalinana ny Korany, miaraka amin'ireo fandikan-teny), Minbar (milaza aminao ny ora tokony hivavahana handohalihana amin'ny karipetra), Hijra (tetiandro silamo) ...... ary mazava ho azy, sivana ho an'ny ray aman-dreny.
Misy ihany koa ny kinova satanika, saingy mitovy amin'ny an'i Justin Bieber.
5) Distros amin'ny fiteniko
Tsy fantatro hoe iza no distro voalohany nampiditra ny fanohanana ny teny Espaniôla, saingy nisy fotoana nisy distros manokana natao ho an'ny fiteny (ny sasany mbola mavitrika hatrany). Ny antony lehibe mahatonga ny maro tsy hijanona dia satria ny fizarana lehibe dia efa misy fanampiana tsara ho an'ireo fiteny ireo. Ireto ohatra: Bee Linux (amin'ny teny Berber, fiteny any Algeria), Nepalinux (amin'ny Nepali), Dzongkha Linux (amin'ny Dzongkha, ny fiteny Bhutan), Arabbix (avy amin'ny Emira Arabo Mitambatra), Ojuba (amin'ny teny Arabo, vita tao Jordania), B2D Linux ary Linux Deepin (amin'ny teny sinoa, ny voalohany vita tany taiza, ny iray kosa any amin'ny repoblikan'ny vahoaka), Turbolinux y Tonga tao Linux aho (amin'ny teny Japoney), Hacao (amin'ny teny Vietnamese), Boss e IndLinux (amin'ny Hindi), Swecha (amin'ny fiteny sinoa), Ehad y Kinneret (amin'ny israeliana), Karamad (amin'ny teny persiana), Pingo Linux (amin'ny teny Slovenianina), Runtu (amin'ny teny rosiana), NordisKnoppix (ho an'ny fiteny skandinavianina sy balicika, natao tany norvezy), baltix (ho an'ny fiteny baletika, vita tany litoania), alinex (amin'ny fiteny portogey) ary LinEspa ary Gulic-BSD (100% SPANISH !!!! !)
Amin'ny tranga iray hafa, ny distros Espaniola amin'ny fiteny hafa dia azo lazaina hoe: Augustux (Aragonese), Catix (Catalan), Lliurex (Valencien, tenim-paritra Katalàna), Asturix (Asturian) ary Galinux ary Trisquel (Galisiana)
Ary ity no santionako amin'ny fizarana. Avelao ny farany hamono ny jiro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Misy ny distro rehetra….
Mangataka an'i Justino Brevas aho '... tokony hanandrana izany distro izany 😛
Miorina amin'ny Puppy… .tsy fantatro raha fanahy iniana io, na kisendrasendra mahatsiravina !! xD
Manaja ny fahasamihafana aho, saingy misy teboka iray. Tazomy ireo distro toa ny Ubuntu, Fedora, OpenSUSE, Debian, Archlinux, Mandriva na Moondrake, RedHat, SuSE ary ny sasany hafa toa ny multimedia, fanovana ary famonjena LiveCD manokana. Saingy ny distros toy ny Ubuntu Christian Edition na ny Satanic Ubuntu dia tsy misy dikany, amin'ny ampahany, ity mihoatra ny maha-samihafa azy, dia sombintsombiny ary noho izany dia tsy hahatratra ny birao ampiasain'ny mpampiasa iraisana mihitsy isika. Miarahaba, Pablo.
Saingy ny fizarana dia tsy omen'ny isa distro, fa ny isan'ny faladiany distro, ny birao, ny systemd / Upstart, amin'ny tsy ahafahanao mampiasa fonosana kisary mitovy amin'ny kde toy ny amin'ny gnome sns. . Ny ankamaroan'ireo distro hafakely ireo dia tokony hiorina amin'ny ubuntu na alika kely ary aza mandray anjara na dia amin'ny sombintsombiny aza.
ceteco dia hoy izy:
Mamaly an'i ceteco
Ny reniko amin'ny fiainako ... Fotoana malalaka inona ...
Ny tena nampifangaro ahy indrindra dia ny Mussolinux O_O !!! (mihoatra lavitra noho ny an'ny Red Star, izay efa fantatro)
ity dia iray amin'ireo olana ary miaraka amin'izay dia fananan'ny fanovana ao amin'ny linux. afaka mamorona distro malalaka. inona no mifanohitra amin'izay.
Ny tena marina dia, tsy fantatro izay nifoka sigara ny olona nanao Linux Bieber (._.), Okay, ny kinova amin'ny fiteninao rahateo ilaina amin'ny localisations sy rindrambaiko hafa, fa ny hafa… ..
angamba… .. angamba hoy aho, raha ny ezaka dia nifantoka kokoa tamin'ny fanatsarana zavatra kely izay, tsy fantatro… .. dia zava-dehibe kokoa, heveriko fa ho sambatra kokoa sy sambatra kokoa isika rehetra noho ny miaraka amin'ny hannah montana linux…. fa inona no fantatro? Anomaly fotsiny aho amin'ny ora voafetra-potoana 😀
aza manahirana, vao niditra tamin'ny fidirana tamim-pifaliana bebe kokoa noho ny mahazatra aho
Hahahahahaha Izaho no tapaka. Fa aza adino fa misy ihany koa ireo distro parasite izay tsy inona akory fa tsy distra mahaleo tena (mahatakatra ny Arch Linux, Debian, OpenSuse, sns.), Izay ampian'izy ireo tontolo manodidina ny birao sy ny wallpaper sy voila roa!! distro vaovao ... ohatra: Cinnarch, ankoatry ny maro hafa ... ny zavatra mampihomehy dia misy olona ahiana hilaza fa tsara kokoa ireo distro ireo noho ny fototra niavian'izy ireo .... XD
Amin'ny Espaniôla, tamin'ny fotoan'ny Red Hat 6, dia Hispafuentes, miorina amin'ny Red Hat, fa amin'ny Espaniôla, satria mahafaty ny fandikana ny Red Hat ao amin'io distro io. Miaraka amin'ny Red Hat 7, niova somary niova ny raharaha. taona vitsivitsy alohan'ny handaozana an'i Linex.
Avy amin'ny Hispafuentes dia nanandrana ny 7 sy 8 aho, hoy aho. Izy ireo dia niaraka tamin'ny PC World na PC Actual.
Mbola tsy maintsy manana azy ireo ao an-trano aho.
Tamin'ny distro no nahalalako betsaka indrindra tamin'izany fotoana izany, satria ny Red Hat 5 sy 6 dia nanana anglisy be dia be ary tsy dia nanana hevitra firy aho tamin'izany, fa tsy hoe androany no nanatsara azy tsara.
Manaiky fa tsy tokony hisy ny ankamaroan'ny lisitra, ankoatra ny vitsivitsy:
Ny distros ho an'ny mangaka ary misy raha ny fahalalako azy, fampiharana manokana ho an'ny fandub, fansub ary izay
Trisquel dia rindrambaiko maimaimpoana tanteraka, izany no akany nofenoiny.
Ary koa, tsara tarehy foana no nanoratanao ary androany dia nitafa-dranomasina tamin'ny ellipsis ianao. Telo ihany no ampiasaina.
Eny, hitako rehefa avy nanindry ny bokotra "Post comment", indrisy fa tsy azo ovaina ireo fanehoan-kevitra.
Na izany na tsy izany misaotra tamin'ny fandinihana.
Enga anie ka ho vita izany, izaho koa dia naneho hevitra fotsiny ary nanoratra hoe "izaho" fa tsy "izy".
Misy ihany koa ny iray amin'ny tsimbadika tsotra o_O mifototra amin'ny ubuntu (zavatra momba ny fiainana xD) ahy eto: Ubuntu Satanic Edition
Mahaliana ilay anarana fa rehefa hitako ny pikantsary dia heveriko fa tsy mendrika ny hisintona azy akory
Raha misy olona te-hanao distro vaovao na miankina amin'ny efa misy (toa ny Ubuntu miorina amin'ny Debian), na avy hatrany am-boalohany, tsy hitako izay olana na zavatra ratsy, aorian'izany rehetra izany dia miresaka momba ny Free Software .. . Ny mahasosotra ahy kely dia ny famoronana governemanta, fandaniana loharano, amin'ny distro miorina amin'ny iray hafa, toa an'i Huayra any Arzantina mifototra amin'ny fitsapana tsy misy hafa noho ny fitsapana an'i Debian, raha ny tsara indrindra azo atao dia ny famoronana fonosana na tahiry. miaraka amin'ny programa manokana na mahaliana ny governemanta, izay iasan'izy ireo amin'ny distros manan-danja indrindra ...
Hehehe .. misy distro ho an'ny olona tsirairay. Raha mbola tsy mifanaraka amin'ny tsirairay izy ireo.
Te hametraka fanontaniana aminao aho, azafady fa miala amin'ilay lohahevitra aho ..: - /
Misy mahalala ve hoe aiza no ahitako lohahevitra kisary sy fisehoana toa ilay iray amin'ny sary farany? Heveriko fa ny KDE 3.5 (mitady lohahevitra Retro miaraka amin'ireo sary mihetsika pixelated tiako be) mifanaraka amin'ny Xubuntu sy ny windows Xfmw.
Misaotra betsaka ary miala tsiny indray!
Ahoana ny Community.
Na dia manaja fatratra ny fahasamihafana sy ny famoronana aza aho, ny marina dia maro ny distro izay tsy tena fantatro izay ataon'izy ireo amin'ny maha distro azy manokana. Ireo naseho teto amin'ity lahatsoratra ity, ary koa ireo "buntus" an-jatony (izay ny maro an'isa, ohatra) izay manampy fotsiny amin'ny tahiry safidy ary raha ny fampiharana dia tsy mandray anjara na inona na inona, ankoatry ny lohahevitra birao vitsivitsy sy sary masina
Raha ny fahitako azy manokana dia tsy mandray anjara amin'ny firaisankina izy ity fa miloka amin'ny fanaparitahana. Araka ny nohazavaiko tany am-piandohana, dia hajaiko fatratra ny fahasamihafana sy ny fahaiza-mamorona, saingy heveriko fa ireo ekipa ireo fa tsy mandany fotoana amin'ny fanaovana distos toy ny hoe fanovana atin'akanjo, no nanampy tamin'ny fanesorana na fanatsarana ny distro reny niorenany. sns .. manana fifehezana kalitao tsara kokoa.
eny ... tsy maintsy manandrana lol isika
Juas! Ny filazana fa ny valencien dia tenim-paritra Catalan ... aza avela hamaky anao ny valencienianina na Catalan ... XDDDD
Amin'ny maha Uruguay ahy, tsy hitako ho fiteny hafa ny fiteny valencien toy ny Catalan. Toy ny milaza fa ny fiteny Uruguay Castilian dia fiteny iray tsy misy ny Castilian of Spain.
Ny zavatra tsara hitako fotsiny dia angamba ny tanora te-hametraka iray amin'ireo distro ireo ho an'ny mpanakanto tiany indrindra
amin'ny WTF goavambe !!!!!!! fa araka ny nolazain'izy ireo teo: «Ity no fahalalahana ...»
Raha ny fahalalako azy dia miasa ihany ny kintana mena, fantatro ny iray amin'ireo mpandrindra ary tsy iray amin'ireo mamoaka tetikasa izy
Any Espana, arakaraka ny fizarana famataranandro, misy maromaro tsy maintsy jereko milamina:
Pussycat misy 54Mb dia misy ronono iray litatra.